काठमाडौं आवतजावतमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, कातिक १ बाट नयाँ नियम !:: Naya Nepal
काठमाडौं आवतजावतमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, कातिक १ बाट नयाँ नियम !
काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिएसँगै सरकारले फेरि काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
दसैं नजिकिएसँगै काठमाडौं छाड्ने र भित्रिनेको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्ने भएकाले सरकार पुन काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्न लागेको हो। यस विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा के भनेर राय मागेका थिए । मन्त्रीहरुले कोरोना नियन्त्रणका लागि काठमाडौं आवतजावतमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रीहरुले सुझाव दिए पनि कुनै निर्णय भने नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसबारेमा सीसीएमसीले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेछ । तर सीसीएमसीका तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नआएकाले निर्णय नभएको उनको भनाइ थियो ।
देशभर जति सक्रिय संक्रमित छन् त्यसको आधाभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो एक महिनायता दिनहुँ देशभर भेटिने संक्रमितको आधाभन्दा बढी काठमाडौंमा भेटिने गरेको छ।
सोमबार ४ हजार ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा उपत्यकामा मात्रै २ हजार २ सय ७३ जना संक्रमित फेला परेका थिए ।
यसरी तिब्र गतिमा कोरोना फैलिएको उपत्यकाबाट बाहिर जाने ब्यक्तिका कारण गाउँ जोखिममा पर्ने र अन्य ठाउँबाट काठमाडौं आउने ब्यक्तिका कारण थप जोखिम बढ्ने भन्दै सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।
हाल काठमाडौं आउने र जानेक्रम निर्वाध रुपमा चलेको छ । असोज एक गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन चल्न थालेसँगै पछिल्लो २६ दिनमा ७ लाखभन्दा धेरै ब्यक्ति विभिन्न नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गरेका छन् भने यतिकै संख्या काठमाडौंबाट बाहिरिएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारले भीडभाड बढी हुने सरकारी कार्यालय कात्तिक १ गतेबाट बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। मालपोत, नापी, यातायातलगायतका कार्यालयमा थेगिनसक्ने भीड बढेपछि सरकारले ती कार्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेको हो ।
यो विषयमा पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनले भने– बैठकमा कात्तिक १ गतेबाट भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो । तर त्यसबारेमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन् ।
बजार क्षेत्र, सडकमा हुने धर्ना, नाराबाजी, जुलुस आदिले पनि सङ्क्रमण फैलाउन मद्दत गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
कोरोना कहर : भारतमा १० अगस्ट यताकै कम कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी अहिले सारा विश्वमा व्याप्त छ ।
हालसम्म विश्वमा कोरोनाबाट १० लाख ८५ हजार ३३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ करोड ८० लाख ३५ हजार ४७० जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै २ करोड ८५ लाख ९७ हजार २०२ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ६९ हजार ७० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
यसैबीच भारतमा हालसम्म १ लाख ९ हजार ८९४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७१ लाख ७३ हजार ५६५ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै ६२ लाख २४ हजार ७९२ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ८ लाख ३८ हजार ८७९ जनाको उपचार भईरहेको छ ।
त्यस्तै ८ हजार ९४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।यसैबीच भारतमा सोमवार मात्रै ५४ हजार २६५ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
यो संख्या १० अगस्ट भन्दा यताकै सबैभन्दा कम संख्या हो । त्यस्तै सोमवार भारतमा ७१० जनाको मृत्यु भएको छ । यो संख्या २५ जुलाई यताकै सबैभन्दा कम हो ।
दसैँमा घर जाँदा ७ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नैपर्ने, कोरोनाको लक्षण नभए मात्र यात्रा गर्न अनुरोध
काठमाडौं। के तपाइँ दसैँ, तिहारका लागि घर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यदि तयारीमा हुनुहुन्छ भने सात दिन क्‍वारेन्टाइनमा बस्नेगरी जानुहोला। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यात्रा गर्नुअघि सात दिन र गनत्व्यमा पुगिसकेपछि सात दिन अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दसैँ तिहारमा घर जाँदा अनिवार्य रूपमा क्‍वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयले उक्त निर्णय गर्दै त्यसको निगरानी स्थानीय तहबाट गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए।
सात दिनको क्‍वारेन्टाइन बसाईपछि कोभिड-१९ को कुनै लक्षण छैन भने मात्र यात्रा गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। क्‍वारेन्टाइनमा बस्दा सबै व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने गौतमले बताएका छन्। “होम क्‍वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था हुँदैन भने सरकारले बनाएका क्‍वारेन्टाइनमा स्थानीय तहको समन्वय तथा निगरानीमा राखिन्छ।” उनले भने। पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार ४०० भन्दा बढी मानिसहरू क्‍वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरू होम क्‍वारेन्टाइन र सरकारले बनाएका क्‍वारेन्टाइनमा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्रिविले व्यवस्थापन संकायका स्थगित परीक्षा मंसिरमा गर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा मंसिरमा गर्ने भएको छ।
मंसिर तेस्रो सातादेखि परीक्षा सुरू हुने त्रिविले सूचना निकालेर जानकारी गराएको हो।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गत चैतदेखि रोकिएका परीक्षा चाडवाडलगत्तै सुरू गर्न लागिएको हो।
त्रिविले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै पुरानै तरिकाबाट परीक्षा लिन लागेको छ।
त्रिवि व्यवस्थापन संकायका अनुसार सेमेस्टर तर्फका स्थगित परीक्षा मंसिर तेस्रो साताबाट सुरू हुन्छ।
सरकारले स्थगित परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै त्रिविले गत असोज ६ मा बैठक गरी स्थगित परीक्षाहरू अब सञ्चालन गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो।
परीक्षा तालिका छिट्टै प्रकाशित गरिने त्रिविले जनाएको छ।